Vaovao - Tombony dimy amin'ny tavoahangy fitaratra eo amin'ny tsenan'ny fonosana
Tombony dimy amin'ny tavoahangy fitaratra eo amin'ny tsenan'ny fonosana
Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny sehatry ny fonosana eo amin'ny tsena anatiny, ny akora famonosana fitaovana isan-karazany, indrindra ny plastika (firafitra: résin synthetic, plasticizer, stabilizer, loko) fonosana tavoahangy, mitazona ny antsasaky ny tsena ambany amin'ny indostrian'ny zava-pisotro. Jiangshan, indrindra noho ny vidiny mora, ny fitaterana maivana ary ny fanodinana tavoahangy plastika mety. Tena malaza eo amin'ireo ozinina zava-pisotro izy ireo. Ny olan'ny phenol A (Emerson) amin'ny tavoahangy plastika izay nipoitra hatrany hatrany dia mitombo ihany koa ny mpanjifa (mpanjifa) mifantoka amin'ny zava-pisotro fonosina anaty tavoahangy fitaratra rehefa misafidy zava-pisotro ho fanjifana izy ireo. satria ny fonosana tavoahangy fitaratra dia tsy hoe mampiseho rivotra iainana ambony ihany, fa efa nandalo ny (tông guò) ny inspeksi'ny departemanta manara-penitra ny kalitaon'ny firenena dia fitaovana fonosana itokisan'ny mpanjifa.
Ny fahaverezan'ny mpanjifa tsikelikely dia nampitandrina ny orinasam-pisotro misy alikaola vita amin'ny plastika. Ny mpamokatra lavitra mahita sasany dia nandao tavoahangy plastika ary nivadika fonosana tavoahangy fitaratra. Na dia hampiakatra ny vidin'ny vokatra aza izy amin'ny voalohany, dia hanana vanim-potoana fampifanarahana ny tsena. Mendrika ny fandinihana maharitra. Raha te handresy ny tsena mandritra ny fotoana maharitra ny orinasa nentin-drazana dia tsy maintsy miova izy ireo ary mampifanaraka fotsiny. Afaka mandresy ny tsena ny fon'ny olona. Ny antony ahazoan'ny fonosana fitaratra miandalana amin'ny ampahany betsaka amin'ny tsena ary ankafizin'ny orinasa mpamono entana dia tsy maintsy manana ny tombony.
Avelao aho hampahafantatra anao ny tombotsoan'ny fonosana tavoahangy fitaratra:
(1) Ny fitaovana fitaratra dia manana toetra tsy misy firaka sy tsy mampidi-doza, ary koa manana fananana misakana tsara, izay afaka manakana tsara ny fitrandrahana sy ny fikajiana ireo zavatra ao anaty tavoahangy amin'ny alàlan'ny gazy isan-karazany, ary afaka misoroka tsara ny fiovaovan'ny atiny. Miakatra etona amin'ny rivotra ny akora;
(2) Ny tavoahangy fitaratra dia azo averina simba ary ampiasaina miverimberina, mampihena ny vidin'ny fonosana ho an'ireo orinasa;
(3) Ny firakotra fitaratra mangarahara dia afaka mamadika mora foana ny lokon'ny tavoahangy tavoahangy. Tavoahangy fitaratra tavoahangy fonosana zava-pisotro nentim-paharazan'ny fireneko, ny vera koa dia karazan-fonosana vita amin'ny tantara efa ela. Miaraka amina fonosana fonosana marobe any an-tsena, ny kaontenera fitaratra dia mbola mitana toerana lehibe amin'ny fonosana zava-pisotro, izay tsy afa-misaraka amin'ny toetra fonosana izay tsy azon'ny fitaovana fonosana hafa soloina.
(4) Ny tavoahangy fitaratra dia azo antoka ary madio ara-pahasalamana, tsy mampidi-doza ary tsy manimba, manana fanoherana ny harafesina ary fanoherana ny harafesin'ny asidra, ary manana tombony manokana amin'ny famonosana divay, indostrian'ny ronono, indostrian'ny solika azo hanina, indostrian'ny zava-pisotro, sns., Mety indrindra ho an'ny asidra. Fangaro, toy ny legioma sy zava-pisotro, fonosana vinaingitra azo hanina;
(5) Ankoatr'izay, satria ny tavoahangy fitaratra dia mety amin'ny famokarana betsaka ny tsipika famokarana mandeha ho azy ataon'ny orinasa, ny teknolojia sy ny fitaovana famenoana tavoahangy fitaratra an-trano dia somary matotra ihany koa, ary ny fonosana tavoahangy fitaratra dia manana tombony lehibe amin'ny famokarana ao an-toerana sy tsena ivelany.
Amin'ny fiainantsika, ny labiera dia zava-pisotro malaza indrindra satria tsy avo dia avo ny diplaoma ananany, ary malefaka kokoa sy matsiro ny tsirony, ary tsy mora ny mamamo raha misotro azy ianao. Mandritra izany fotoana izany, feno labiera vitsivitsy ny labiera. , Mahatonga azy io ho matsiro kokoa, ary misy fiatraikany bebe kokoa amin'ny tendron'ny lela, ka taorian'ny nidirantsika teto amin'ny firenentsika dia nisambotra haingana ireo tanora ny divay. Ny tsenan'ny alikaola dia tian'ny tanora maro, fa raha te hitondra labiera any amin'ny toerana samihafa ianao dia tsy maintsy mitaky fonosana isan-karazany koa. Misy fonosana labiera fahita roa eny an-tsena, ny iray labiera amin'ny tavoahangy fitaratra, ary ny iray labiera ao anaty kapoaka. Inona no mahasamihafa azy roa? Tamin'ny voalohany dia maro ny tanora no tsy maintsy nieritreritra fa tsy misy mahasamihafa azy roa, satria tsy mitovy ny fitaovana. Raha ny marina, raha fantatrao ny antony ao ambadik'izany, tombanana fa tsy hividy labiera diso ianao raha misotro labiera amin'ny ho avy.
Fantatsika rehetra fa am-polony taona mahery talohan'ny fahazazan'ny tsirairay dia efa tsy dia nalaza firy ireo kapoaka marobe teny an-tsena, ka teny an-tsena ny tsenan'ny labiera tamin'izany fotoana izany, ny labiera tavoahangy fitaratra no be mpampiasa, ary tao anatin'izay folo taona lasa izay, kapoaka nosoloina tsikelikely labiera vera. Ao amin'ny talantalana fivarotana lehibe na fivarotana dia matetika no mahita labiera ao anaty fitoerany. Noho ny vidiny ambany, ny lanjany maivana, mora entina, dia afaka mitazona fahamendrehana tsara kokoa mandritra ny fitaterana izy, noho izany dia malaza amin'ny olona maro ny labiera kapoaka. Tadiavina.
Fa raha ny rafi-pamokarana fambolena dia mandeha any amin'ny bara fanaovana labiera avo lenta, dia ho hitanao eo amin'ny talantalana ireo karazan-labiera rehetra, saika tavoahangy fitaratra avokoa izy rehetra ary tsy dia hitanao intsony ny labiera amin'ny kapoaka, ka labiera anaty tavoahangy fitaratra izao lasa mitovy dika amin'ny labiera avo lenta ihany koa. Fa misy inona? Hita fa ny labiera dia namboarina avy amin'ny mikraoba varimbazaha, ka ny karbaona dioksida na ny azota dia ampiana hanindry rehefa feno, ary ny oksizenina ao anaty tavoahangy dia avoaka araka izay tratra.
Noho izany, avy amin'ny fitaovan'ny kapoaka sy tavoahangy fitaratra dia azontsika atao ny mahita hoe inona ny effet pressurization no tsara kokoa. Ny hatevin'ny tavoahangy vera dia lehibe sy mahery noho ny kapoaka. Ny tsindry zakainy dia lehibe kokoa noho ny an'ny kapoaka. , Rehefa mihabe ny tsindry dia azo ampiana tsindry ambony kokoa, mba hiarovana ny kalitaon'ny labiera. Ankoatr'izay, ny vera dia fitaovana iray misy fananana simika tena marin-toerana, ary tsy mamaly simika amin'ny labiera ao anaty tavoahangy. Na izany aza, amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny firaka vita amin'ny vy ny alimina ho toy ny akora. Ny sasany mety hitranga rehefa mifandray amin'ny labiera izy ireo. Ho valin'izany, rehefa mandeha ny fotoana, ny tsiron'ny labiera dia hiova lehibe tokoa, hahatonga ny labiera ho mahatsiravina ary ho metaly aza.
Ka raha misotro labiera fotsiny isika mba hahamora sy haingam-pandeha fa tsy ho an'ireo manana mari-pahaizana labiera manankarena, amin'ny toe-javatra mahazatra, dia misafidy labiera am-bifotsy, satria tsy manana fikatsahana labiera avo lenta toy izany koa isika, ary tsy misotro be loatra. Meteza manokana. Na izany aza, raha tsy mihevitra ny lanjany sy ny fivezivezena ianao, raha ny fahitana ny fanandramana labiera dia tsara kokoa ny labiera ao anaty tavoahangy fitaratra noho ny labiera am-bifotsy. Noho izany, raha te hanandrana ny kalitao sy ny dikany ny labiera isika dia tsara kokoa ny misafidy labiera avo lenta ao anaty tavoahangy fitaratra.